အဆို တော် ထက်ယံ နဲ့ ပတ် သတ် တဲ့ သတင်း တွေ ဖော် ထုတ် လိုက် တဲ့ ဟန်ငြိမ်း ဦး – Shwewiki.com
အဆို တော် ထက်ယံ နဲ့ ပတ် သတ် တဲ့ သတင်း တွေ ဖော် ထုတ် လိုက် တဲ့ ဟန်ငြိမ်း ဦး
ထက်ယံ(Htet Yan) ကိုတော့ အချစ် သီချင်း မြူးမြူး လေးတွေ က နေတဆင့် ပရိသတ်တွေ စတင် သိရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ ဂီတနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သီချင်းတွေရေး၊ သီချင်းတွေ ဆိုရင်းကနေမှတဆင့် အနုပညာလောကထဲကို ရောက်ရှိလာခဲ့သူပါ။
အနုပညာရှင် အတော် များများရဲ့ လျို့ဝှပ် တစ်ချို့ ကို အမြဲ ထုတ်ဖော်သူ အမွှေစိန် ဟန်ငြိမ်းဦး ကတော့ ယနေ့မှာ အဆိုတော် ထက်ယံရဲ့ အကြောင်းကို ဖွင့်ထုတ် လာပြန်ပါတယ်နော်။
မကြာသေး ခင်က သူကိုယ်တိုင် ရေးသားပြီး သီဆိုထားတဲ့ ‘’နွေးသွားတယ်’’ ဆို တဲ့ သီချင်းလေးကလည်း ဆယ် ကျော်သက် လူငယ်လေးတွေရဲ့ ပါးစပ်ဖျားမှာ ရေပန်းစားခဲ့ တာကို တွေ့ရပါတယ်။ အများ အားဖြင့် ထက်ယံက သူကိုယ်တိုင်ရေး ကိုယ်တိုင် ဆိုထားတဲ့ သီချင်းတွေနဲ့ အောင်မြင်နေတဲ့ သူပါ။
အဆိုတော် ထက်ယံ ဆို့အောက် မသိသေးတဲ့သူတွေအတွက် တင်ပေးတာ 😁 ဆိုပြီး ထက်ယံ နဲ့ ချစ်သူလေးတို့ရဲ့ ခရီးစဉ် ပုံရိပ်လေးတွေ ယခုလို ချပြ လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။
အခုလိုအဆုံးထိ ဖတ်ရှုပေးတဲ့ အတွက် ကျွန်တော်တို့ Page မှ အထူးပင် ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်နော်…နောက်များမှာလည်း အခုလိုဆယ်လီ တို့ရဲ့ သတင်းများနှင့် ပြည်တွင်းပြည်ပ သတင်းများကို အချိန်နှင့်တပြေးညီတင်ဆက်ပေးမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့ Page လေးကို Like & See First လေးလုပ်ပေး သွားကြပါအုံးနော်….
အဆို တျော ထကျယံ နဲ့ ပတျ သတျ တဲ့ သတငျး တှေ ဖျော ထုတျ လိုကျ တဲ့ ဟနျငွိမျး ဦး
ထကျယံ(Htet Yan) ကိုတော့ အခဈြ သီခငျြး မွူးမွူး လေးတှေ က နတေဆငျ့ ပရိသတျတှေ စတငျ သိရှိလာခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ သူဟာ ဂီတနဲ့ ပတျသကျပွီး သီခငျြးတှရေေး၊ သီခငျြးတှေ ဆိုရငျးကနမှေတဆငျ့ အနုပညာလောကထဲကို ရောကျရှိလာခဲ့သူပါ။
အနုပညာရှငျ အတျော မြားမြားရဲ့ လြို့ဝှပျ တဈခြို့ ကို အမွဲ ထုတျဖျောသူ အမှစေိနျ ဟနျငွိမျးဦး ကတော့ ယနမှေ့ာ အဆိုတျော ထကျယံရဲ့ အကွောငျးကို ဖှငျ့ထုတျ လာပွနျပါတယျနျော။
မကွာသေး ခငျက သူကိုယျတိုငျ ရေးသားပွီး သီဆိုထားတဲ့ ‘’နှေးသှားတယျ’’ ဆို တဲ့ သီခငျြးလေးကလညျး ဆယျ ကြျောသကျ လူငယျလေးတှရေဲ့ ပါးစပျဖြားမှာ ရပေနျးစားခဲ့ တာကို တှရေ့ပါတယျ။ အမြား အားဖွငျ့ ထကျယံက သူကိုယျတိုငျရေး ကိုယျတိုငျ ဆိုထားတဲ့ သီခငျြးတှနေဲ့ အောငျမွငျနတေဲ့ သူပါ။
အဆိုတျော ထကျယံ ဆို့အောကျ မသိသေးတဲ့သူတှအေတှကျ တငျပေးတာ 😁 ဆိုပွီး ထကျယံ နဲ့ ခဈြသူလေးတို့ရဲ့ ခရီးစဉျ ပုံရိပျလေးတှေ ယခုလို ခပြွ လာတာပဲဖွဈပါတယျနျော။
အခုလိုအဆုံးထိ ဖတျရှုပေးတဲ့ အတှကျ ကြှနျတျောတို့ Page မှ အထူးပငျ ကြေးဇူးတငျရှိပါတယျနျော…နောကျမြားမှာလညျး အခုလိုဆယျလီ တို့ရဲ့ သတငျးမြားနှငျ့ ပွညျတှငျးပွညျပ သတငျးမြားကို အခြိနျနှငျ့တပွေးညီတငျဆကျပေးမှာ ဖွဈတဲ့အတှကျ ကြှနျတျောတို့ Page လေးကို Like & See First လေးလုပျပေး သှားကွပါအုံးနျော….
ဝေဖန်မှု တွေခံ ရပေမယ့် ကိုယ်ရဲ့ ဖြစ် တည် မှုကို ယုံယုံ ကြည်ကြည် နဲ့ လက်ခံ ရမယ် ဂရုစိုက် ရမယ် ဆိုတဲ့ စုနိုင်